Shiinaha Alucosun PE warshad iyo alaab-qeybiyeyaal. Alucosun
Waraaqaha Aluminium ee labada dhinacba iyo heerka 3mm ee dhumucda heerkulka kuleylka leh ayaa si heer sare ah isugu xira foomam guddi qallafsan oo awood u leh inay u babac dhigaan xoogagga dibedda ee qaab dhismeedka derbiga aan culeyska saarin.
Alucosun ®ACP waa shey aad u fiican oo fidsan oo leh dhumuc isku mid ah oo laga soo saaray mashiinno tiknoolajiyad sare leh iyo hubin tayo leh oo adag; waxay bixisaa muuqaal siman oo qurux badan dusha sare ee dhismaha ay ku duuban tahay.
ECO SXB AH
ACP waa badeecad dib loo isticmaali karo. Aluminium iyo sidoo kale maaddooyinka aasaasiga ah dib ayaa loo warshadeeyay loona isticmaalay, sidaas awgeed ACP waxaa loo tixgeliyaa inay tahay wax soo saarka Eco-Friendly.
SI FUDUD LAGU HELI KARO
Alucosun®iskudhafku waa fududahay in la ilaaliyo.Maas ku maydhashada biyaha ama nadiifiyeyaasha khafiifka ah waxay ka saari karaan boodhka iyo wasakhda, farsamooyinka rakibidda la qabsiga ee hab lagu beddelayo boodhadhka dayactirka ee waxyeelada shilalka ah iwm waxay ka dhigaysaa wax soo saar si fudud loo ilaalin karo.
KHARASHKA SI FUDUD
Aluminiumka isku-darka ah ee Aluminiumku waa kharash wax ku ool ah alaabooyinka baqshadaha leh ee la barbardhigo aluminiumka birta ah, birta steelorglass, waxay bixisaa noocyo badan oo dhammaystiran oo wanaagsan iyo midabyo waara oo lagu doorto.
Wax soo saar badan oo loo adeegsan karo naqshad kasta orshape si fudud u sameeya aluminium Isku-darka Aluminium gaar ah oo la doorto ee naqshadayaasha si loo abuuro naqshadooda riyadeeda.
Guddiyada Isku-dhafan ee Aluminium ee caadiga ah waxay ka kooban yihiin udub-dhexaad heerkulbeeg ah oo ah LDPE oo ku xiran alwaaxyada Aluminium ee labada dhinacba.
Alucosun-PE®waa mid aad u jilicsan oo leh sheyga xoogga isku xidhka wanaagsan. Waxay kuxirantahay iska caabinteeda isbarbar dhiga dabka hada waxaa loo adeegsadaa ugu horeyn xayeysiinta iyo warshadaha calaamadaha oo ah shaqo doorbidid. Si kastaba ha noqotee, wali waxaa loo isticmaalaa sida waji xirxirida dhismayaasha dhaadheer ee halista dabka ka yar tahay.
Dhererka mm 2400,3050 ≤8000
Dhumucdiisuna mm 3 & 4 2-15
Aluminium qaro weyn mm 0.50 0.12-0.70
Culeys Gaara - Kg / M3 1350
Miisaanka - Kg / M2 5.6
Them. Qabsashada ASTM C 518 W / (mK) 0.43
Dheeraynta ASTM E8 % 17%
Khasaaraha Gudbinta Codka Yaraynta Buuqda ASTME413 STC 25
Hore: Alucosun FR
Xiga: ALUMINUM QALABKA SALKA